Global Voices teny Malagasy » Ny Fitetezana ny mozika afrikanina (2006) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Oktobra 2019 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra Obi Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Nizeria, Senegal, Zimbaboe, Mediam-bahoaka
Inona izany hip hop Afrikanina? Avy any Nairobi ka hatrany Dakar, nahasarika ny sain'ny tanora ny hip hop, izay mamokatra tarika mpanao rap, break dance ary b-boys marobe. Maro no mihevitra fa avy amin'ny vanim-potoanan'ny Mpampita hevitra araka ny fombandrazana afrikanina no nipoirany, mihevitra kosa ny sasany fa zavatra niainan'ny Afrikana-Amerikanina manokana izany. Na avy aiza na avy aiza anefa no nipoiran'ny hip hop, dia tsy mampiova zavatra izany, fitempo sy gadona ihany. Obi no anarako ary mibilaogy ao amin'ny soul on ice . Tongasoa ato amin'ny fitetezana ny mozika Afrikanina.
Complicated Fun  mamoaka ny momba ny hip hop Kenyana sy ny Afrofuturism  ary miresaka momba ny Fetin'i Kenyatta tany Minneapolis (10 oktobra 2005).
“While Kenyatta Day  offers a glimpse of Africa's future in hip hop and cinema (see below), the local exhibit, discussion, and events surrounding Afrofuturism at the Soap Factory (near St. Anthony Main) peer forward into the future of the African Diaspora, and use the sci-fi imagination to satirize the past”
Raha nanolotra topi-maso amin'ny hoavin'ny Afrika eo amin'ny taranja hip hop, sarimihetsika (jereo etsy ambany) ny Fetin'i Kenyatta , dia niditra Afrofuturism tao amin'ny Soap Factory (akaikin'ny Lalambe St. Anthony), ary nampiasa fomba fakana sary an-tsaina sci-fi mba hamasohana ny lasa ary hitodihana amin'ny hoavin'ny zanaka ampielezana Afrikanina ny fampiratiana ao an-toerana, ny fifanakalozan-kevitra sy ny hetsika nataonay”
Manohy ny Complicated Fun  amin'ny firesahana ny fandefasana voalohany ao an-toerana ny sarimihetsika fanadihadiana antsoina hoe Hip Hop Colony izay notontosain'ny tale Kenyana Mike Wanguhu.
Miresaka momba ny ekipa hip hop Senegaley Daar J  ny Bob's blog :
“If Africa is in the midst of a hip-hop renaissance, the Senegalese trio Daara J could be the movement's foremost statesmen. Earning accolades worldwide for their vibrant 2004 record Boomerang  (Wrasse Records ), the Dakar-based MCs Faada Freddy, N'Dongo D and Aladji are keen to explore the links between worlds old and new, and their music lies at the crux of what they call an emerging “hip-hop civilization.”
“Raha ao anatin'ny famelomana indray ny hip hop i Afrika, dia mety ho olona manan-kaja indrindra amin'ny hetsika ny trio Senegaley Daara J. Nahazo fankasitrahana tamin'ny olona maneran-tany noho ny zava-bitan'izy ireo tsara indrindra tamin'ny taona 2004, Boomerang  (Wrasse Records ), afaka mitrandraka ny fifandraisana eo amin'ny tontolo taloha sy ny vaovao i MCs Faada Freddy, N'Dongo D sy Aladjiina any Dakar, ary anisan'ny antsoin'izy ireo hoe ” sivilizasiona hip-hop vaovao” ny mozikan'izy ireo .
Manome rohy  mankany amin'ny resadresaka niaraka amin'i Faada Freddy sy rohy  mankany amin'ny mozikan'izy ireo sasany (kexp seattle ) ny bilaogin'i Bob.
Mandeha ny Amboara Afrikaninin'ny Firenena  ary mampatsiahy antsika ny tsy fahombiazan'i Nizeria handray anjara amin'ny amboara manerantany i Naija Jams . Andro mialoha ny lalao fanokafana hifanandrinana amin'i Ghana, avy amin'ilay mpihira Amerikanina sady milaza fa mpilalao baolina kitra, Pa-J  ny teny fampaherezana:
Ny bilaogy Best Ambiance  kosa manolotra antsika:
Nandefa rohy  mankany amin'ny fandaharana antserasera amin'ny onjam-peo (kexp seattle ) ary manome raki-tsarin'ny mozika ny bilaogy Best Ambiance. Afaka mahita rohy mankany amin'ireo fampisehoana voatahiry ao amin'ny bilaogy ihany koa ianao. Mahita aho fa ny rohy ao amin'ny Real Radio no tsara indrindra. Mozika tsara dia tsara.
Mamoaka fanadihadiana mahaliana miaraka amin'i Thomas Turino, profesora momba ny mozika sy ny anthropôlôjia ao amin'ny Oniversiten'i Illinois ao Urbana ny bilaogin'ny BluePie Artists .
Nalaza ary mbola malaza foana noho ny mozikany manohitra ny governemanta tamin'ny vanim-potoana Rhodeziana i Thomas Mapfumo . Tamin'ny resadresaka natao, dia miresaka momba ny asa fikarohana nataony sy ny fijanonany tany Zimbaboe ny profesora Turino.
Manasongadina tetikasa mozika mahaliana ataon'ny DJ Doug Schulking , antsoina hoe Culture Shock ny WFMU's Beware of the blog .
Manolotra mozika avy amin'ireo mpanakanto Afrikana (Ali Farka Toure , Babba Maal), mpanakanto Indianina sy Shinoa ny Culture Shock. Nanolotra ny mp3 rehetra azo trohana maimaim-poana miaraka amin'ny fampahalalana momba ny hira tsirairay i Doug ho fanomezana ho an'ireo mpihaino azy. Manana fampisehoana mozika an-tserasera antsoina hoe “Give the Drummer Some” koa izy. Voatahiry ao amin'ny pejiny ireo fampisehoana taloha.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/10/139528/
 Complicated Fun: http://blogs.citypages.com/pscholtes/2005/10/kenyatta_day_an.asp
 Kenyatta Day: http://kilimanjaroentertainment.com/Kenyatta%20Day%202005.htm
 Daar J: http://www.wrasserecords.com/artists/info/50.html?AddInterest=1010
 Bob's blog: http://www.bobsblog.com/
 Wrasse Records: http://www.wrasserecords.com
 Wrasse Records: http://www.wrasserecords.com/
 kexp seattle: http://www.kexp.org/
 Amboara Afrikaninin'ny Firenena: http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/africa/default.stm
 Naija Jams: http://www.naijajams.com/
 Ny bilaogy Best Ambiance: http://spaces.msn.com/bestambiance/blog/
 ny bilaogin'ny BluePie Artists: http://bluepieartists.blogspot.com/2005/12/thomas-turino-interview-zimbabwe.html
 Thomas Mapfumo: http://africanmusic.org/artists/mapfumo.html
 DJ Doug Schulking: http://www.wfmu.org/Playlists/Doug/
 WFMU's Beware of the blog: http://blog.wfmu.org/freeform/2005/07/culture_shock_m.html
 Ali Farka Toure: http://africanmusic.org/artists/alifarka.html